::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather असोज पहिलो सातासम्म संघको भवन निर्माण शुरु हुन्छ:: Rojgar Manch ::
असोज पहिलो सातासम्म संघको भवन निर्माण शुरु हुन्छ
रोहन गुरुङ, अध्यक्ष नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
मंगलवार, २०७४ श्रावण ०२ गते ०५:१३
रोहन गुरुङ, अध्यक्ष
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २५ औ चुनावी साधारणसभाबाट टप जब्स प्रालिका संचालक रोहन गुरुङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा महासचिव रहँदा व्यवसायीका समस्यामा तत्काल रेस्पोन्स जनाउने र पेपरवर्कलाई प्राथमिकता दिने गुरुङ चुनावी प्रतिष्पर्धामा आफ्नै कार्यसमितिका अध्यक्षलाई ९३ मतले पछि पार्दै संघको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका हुन् । व्यवसायी माझ लोकप्रिय बनेर अध्यक्षमा नवनिर्वाचित गुरुङसँग उनका भावी कार्ययोजनाका बारे रोजगारमञ्चले गरेको कुराकानी :
आफ्नै कार्यसमितिका अध्यक्षसँग प्रतिष्पर्धा गरेर चुनाव लड्दाको अनुभव चाहिँ कस्तो हँुदो रहेछ ?
दुई वर्षसम्म सँगै काम गरेको हुनाले केही असहज चाहिँ पक्कै मलाई महशुस भयो । मेरा राम्रा–नराम्रा पक्ष र उहाँका पनि राम्रा–नराम्रा पक्ष हामी दुवैलाई थाहा भएको अवस्था हो । दुःख सुख जे भएपनि २ वर्ष सँगै बिताएकाले उहाँसँग प्रतिष्पर्धी भएर चुनाव लडिरहँदा अन्य प्रतिष्पर्धीभन्दा केही अफ्ठयारो भने मलाई महशुस भएकै हो । सायद उहाँलाई पनि यस्तै भयो होला ।
निर्वाचनमा प्राप्त मतपरिणाम हेर्ने हो भने तपाई सहजढंगमा बिजयी हुनुभयो । तर, व्यवसायीबाट त्यती मत प्राप्त गर्न निकै कसरत गर्नु भयो भन्छन नि ? जनमत तपाइकै पक्षमा रहेछ या मेहनतको परिणाम हो यो ?
यसलाई यसरी बुझौ । विगतमा पनि घरदैलो कार्यक्रम हँुदै आएको हो । क्षेत्रीय भेलाहरु पनि भएकै हुन् । त्यसैलाई हामीले यो पटक पनि निरन्तरता दिएका हौं । यहीबीचमा केही भ्रामक समाचारहरु बाहिर आए । व्यवसायीहरु आतंकित भए । निर्वाचनको क्रममा ज–जस्ले त्यस्तो काम गरे पनि त्यो गर्न हुँदैनथ्यो । त्यसले केही नकारात्मक सन्देश प्रवाह ग¥यो पनि । अर्को कुरा आम व्यवसायीले व्यक्ति पनि हेर्नुभयो । मैले महासचिव पदमा रहेर यो २ वर्षमा गरेको कामको मूल्यांकन व्यवसायीहरुले गरिनैरहनु भएको थियो र निर्वाचनको परिणामले पनि त्यही इंकित गरेको मलाई लाग्छ । अर्को कुरा एउटा प्यानल नै निर्वाचित हुँदा काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेरै व्यवसायीहरुले त्यसै अनुसार मतदान गर्नुभएको मैले बुझेको छु । र, व्यवसायीहरुको आशा तथा भरोसालाई टुट्न दिदैनौ भनेरै हामी काम गरेर देखाउँछौ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्याप्त सिण्डिकेट हटाउने प्रतिवद्धता तपाईले निर्वाचनको क्रममा पनि जनाउनुभएको थियो । निर्वाचित भएपछि यी सिण्डिकेट विरुद्ध डटेर लाग्ने निर्णय तपाइको पहिलो कार्यसमितिको बैठकले पनि गरेको छ । तर यी सिण्डिकेटहरु तपाई महासचिव हुँदा पनि लागेकै थिए नि । यो सिण्डिकेटको जालो तोड्न साँच्चै सक्नुहुन्छ वा भोट माग्ने काइदा हो ?
यसमा मैले बुझेको कुरा गलत चिज हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै चुप लागेर बस्न हँुदैन । हिजो म एउटा आम व्यवसायी भएर काम गरिरहँदा होस या आज सबै व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि होस मेरो धारणा प्रष्ट छ । सबै व्यवसायीले समान ढंगमा पेशा–व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ । यी जतिपनि सिण्डिकेट अहिले लागेका छन ती सबै मलेसियाको बेस्टिनेट कम्पनीका ‘वीङ्स’हरु हुन् । नेपालमा हुने सबै गतिविधी त्यही बेस्टिनेटको इशारामा भैरहेको छ । यतीसम्म कि नेता, सांसदलाई समेत प्रभावमा पार्ने काम भएको मैले सुनेको छु ।
तर मेरो निर्वाचित कार्यसमिति चाँडै नै परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका अधिकारी र मन्त्रीहरुसँग छलफल तथा वार्ताका माध्यमबाट यसलाई अन्तिम निचोडमा पु¥याउने सोचमा छ र पु¥याउछौ पनि । विदेशिने कामदार र व्यवसायी माथि भइरहेको लुटलाई खुलेआम र मौन रुपमा राज्यले समर्थन जनाउन मिल्दैन र त्यो हामी व्यवसायीलाई मान्य पनि हुँदैन । यदि यी सिण्डिकेटको विरुद्धमा राज्यले कुनै निर्णय लिदैन भने हामी भौतिकरुपमा यसको विरोधमा उत्रन्छौ । चाहे आफ्ना कार्यालय बन्द गरेर होस या संघको सदस्यता खारेज गरेर वा सामाजिक बहिस्कार गरेर तर मलाई विश्वास छ कामदार र व्यवसायीको पक्षमा सरकारले केही न केही निर्णय चाँडै नै गर्छ ।
आज यिनै सिण्डिकेटले गर्दा मलेसिया जाने कामदार १८ हजारभन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य छन । तर राज्य भने १० हजारमा कामदार पठाउने नीति अबलम्बन गर्छ र यि सिण्डिकेटलाई भने संस्थागत गर्ने छुट दिन्छ । के वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति यही हो त ? ठिक छ व्यवस्थित गर्ने नीति र मनशाय सरकारको छैन भने यसरी नै लथालिङगढंगमा चल्न दिने होत । जतिन्जेल चल्छ चल्छ । तर हामी त्यो पक्षमा छैनौ । अब यसलाई व्यवस्थित बनाउदै विदेशिने कामदार सस्तो र सरलढंगमा जान पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो वातावरण सिर्जना गर्न मेरो कार्यसमिति पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ ।
अब प्रसंग बदलौ, संघ स्थापना भएयता अहिलेसम्म निर्वाचित भएका सबै अध्यक्षका चुनावी एजेण्डा संघको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने रहेपनि अहिलेसम्म यो एजेण्डा पुरा भएको छैन । तपाई निर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले नै भवन निर्माण प्रक्रिया बढाउन एउटा समिति निर्माण गरेको छ । के तपाइकै कार्यकालमा संघको आफ्नै भवन बन्छ त ?
हामीले जुन जग्गामा भवन निर्माण गर्ने भनेका छौ त्यसको डिजाइन पनि तयार भैसकेको छ । हाम्रो जग्गाबाट बाटोको लागि केही भाग छाड्नुपर्ने र मालपोत कार्यालयबाट लालपुर्जाको प्रतिलिपि लिने काम बाँकी रहेको हँुदा यही हप्ताभित्र यो काम हामी सम्पन्न गरिसक्छौ । भवन शिलान्यासका लागि राम्रो साइत हेरेर संभवत असोजको पहिलो सातासम्ममा हामी भवन निर्माणको प्रक्रिया थालिसक्छौ । भवन निर्माणकै लागि अग्रज व्यवसायी हेम गुरुङको संयोजकत्वमा संघका सबै पूर्वअध्यक्ष सल्लाहकार रहने गरी समिति गठन गरिसकेका छौ । अब यो समितिलाई पूर्णता दिएर अन्य आवश्यक उपसमितिहरु हामी चाडैनै गठन गर्नेछौ । बिगतमा कस्का चुनावी एजेण्डा बने या बनेनन् त्यसमा अल्झिने भन्दा पनि अग्रज व्यवसायीहरुको साथ समर्थन र सल्लाह लिएर अब मैले गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्नेतर्फ मेरो कार्यसमिति अघि बढ्छ । यसमा विश्वस्त रहन म सबै व्यवसायीलाई आग्रह गर्दछु ।
तपाईको कार्यकालमा अन्य त्यस्ता के काम गर्छु भन्ने योजना बनाउनुभएको छ त ?
पहिलो त हामी भवन निर्माणको काम सुरु गर्दैछौ । दोश्रो अनलाइन पोर्टलमार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको विवरण संकलन गर्ने रहेको छ । यसका लागि हामी चाडैनै प्राविधिकहरुको समूहसँग छलफल गर्दैछौ । बढीमा १५ दिनभित्र अनलाइन पोर्टलको निर्माण गरी व्यवसायीहरुलाई युजर नेम र पासवर्ड दिइसक्छौ । व्यक्तिगतरुपमा भन्दा म ५ वर्षअघि कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनिरहँदा अनलाइन पोर्टलमार्फत कामदारको आवेदन लिने योजना अघि सारेको थिएँ । तर ढिलै भएपनि यो योजना कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । जसरी अहिले हामीले विदेशिने कामदार खोजिरहनुपरेको छ या विदेशिने कामदारले कुन मेनपावरमा राम्रो माग छ भनेर पत्रपत्रिका तथा मेनपावर चहार्दै हिड्नुपरेको अवस्था छ तर यो पोर्टलमार्फत मेनपावरले आफ्ना माग पनि त्यहाँ राख्नेछन र विदेशिन इच्छुक कामदारले आफ्नो योग्यता तथा क्षमता अनुसारको काम छानेर विवरण भर्न पाउनेछन् । जसले मेनपावर र कामदारबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क गराउने छ ।
त्यस्तै अर्को योजना भनेको मेनपावरका शाखा संचालन सम्वन्धी व्यवस्था मिलाउनेछौ । संघको अध्यक्ष सदस्य रहने गरी वैदेशिक रोजगार विभागले शाखा संचालन सम्वन्धी कमिटि गठन गरेको छ । शाखा कार्यालय विस्तार गरी एजेण्टको कार्यालय खारेज गर्न संघले गतवर्ष नै विभागलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा त्यसरी अनाधिकृत रुपमा खोलिएका एजेण्टका सम्पर्क कार्यालय आज पनि बन्द हुन सकेका छैनन् । हाम्रो माग ती अनधिकृतरुपमा संचालित एजेण्टका सम्पर्क कार्यालय तत्काल खारेज हुनुपर्छ र शाखा कार्यालय संचालन सम्वन्धी निर्देशिका बन्नुपर्छ भन्ने हो । अझ भोलिका दिनमा संघिय ढाँचा अनुरुप शाखा कार्यालय संचालन सम्वन्धी व्यवस्था बनाइनुपर्दछ ।
मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ तिनै अनाधिकृतरुपमा संचालित एजेन्टका कारणले आज हामी व्यवसायी बद्नाम हुनुपरेको छ । हामीले पाउने सेवाशुल्क सम्वन्धी व्यवस्था प्रष्ट नभइरहेको अवस्थामा आज प्रतिनिधी एजेण्टहरुले भने मनोमानी ढंगमा शुल्क उठाइरहेका छन् । जसको मार हामीले खेप्नुपरेको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार विभागमा सहजढंगमा काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने र त्यो आभाष व्यवसायीलाई दिलाउने मेरो अर्को योजना हो । र, नीतिगत रुपमा मेरो कार्यसमितिले गर्ने मुख्य काम सेवाशुल्क सम्वन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नु तथा संशोधनको अन्तिम तयारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनमा धरौटी बढ्न नदिने र बर्गिकरण गर्न नदिने रहेको छ ।
तर तपाई त संघलाई राजनीतिमुक्त गर्छु भनिराख्नुभएको छ । यि सबै काम राजनैतिक पहुँच विना सम्भव होला ?
राजनैतिक लोगो भिरेको व्यक्ति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुनु हँुदैन । आस्थाका आधारमा कुनै पार्टीसँग उसको झुकाव हुनु आफ्नो ठाउँमा छ । तर, संघ भनेको एउटा साझा संस्था हो । हाम्रो मुलुकमा त केही महिनामै सरकार परिवर्तन भैरहन्छ, मन्त्री फेरिइरहन्छन । यसैले सबैसँग काम गर्न पनि संघको अध्यक्ष सम्पूर्ण व्यवसायीको साझा व्यक्ति बनेर सरकारसँग काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ । आज तपाई फलानो पाटीको हुँ भन्नुहोला तर तपाइले भनेको पार्टी सरकारमा नरहँदा वा विपक्षी पार्टीसँग रहेर काम गर्नुपर्दा व्यवसायीका मुद्धा नीतिगतरुपमा कसरी सुल्झाउन सक्नुहुन्छ ? अर्को कुरा हामी चाडैनै विभिन्न राजनैतिक पाटीनिकटका व्यवसायीहरु र पूर्वअध्यक्षहरु सम्मितिल एउटा समिति बनाउँदैछौ । त्यो समितिका सदस्यले आफ्नो पाटी निकटका नेताहरुमार्फत व्यवसायीका समस्या समाधानमा पहल गर्नु हुनेछ । पाटीगतरुपमा आफ्ना नेतालाई हाम्रो समस्याका बारेमा अवगत गराउन लोकतान्त्रिक फोरम छ, प्रगतिशिल मञ्च छ, गणतान्त्रिक मञ्च छ, तराई वैदेशिक रोजगार फोरमलगायतका संस्था छन् । हाम्रा समस्या समाधानमा ती संस्थाका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरुको मुभमेन्ट रहन्छ । मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिलेसम्म हाम्रा गतिविधी भेट्ने र ज्ञापनपत्र दिनेमै सीमित भयो ।
मैले भन्न खोजेको राजनैतिकमुक्त संघ बनाउन सकियो भने संघलाई मात्र होइन हामी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र जुनसुकै दलको सरकार भएपनि हाम्रा एजेण्डा सम्वोधन गर्न दबाब पर्छ ।
अन्त्यमा तपाईलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गराउने सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो त व्यवसायीहरुले जनाउनुभएको साथ, सहयोग, समर्थन र उपस्थितिलेनै संघको २५ औ साधारणसभा र निर्वाचन भव्य र सभ्यरुपमा सम्पन्न भयो । विगतमा साधारणसभापछि हुने बन्दसत्रमा हाम्रा समस्या र संघ नेतृत्वले गरेका कामका बारेमा त्यती धेरै छलफल हुँदैनथ्यो । तर यस पटक हामीले हाम्रा समस्याका विषयमा गहनढंगमा छलफल ग¥यौ । संघका पदाधिकारीले गरेका कामका बारेमा व्यवसायीलाई जानकारी गरायौ । असन्तुष्टिहरु एकआपसमा माझ्ने काम ग¥यौ । निर्वाचनमा मैले जति मत ल्याएर बिजयी बनेपनि त्यो एउटा प्रक्रिया मात्र थियो । अब म सबै व्यवसायीको साझा घरको अध्यक्ष हुँ । मेरो कार्यसमिति सबै व्यवसायीको हीतमा काम गर्न प्रतिवद्ध छ । हामी व्यवसायीका सल्लाह तथा सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्छौ ।
प्रस्तुति :दिनेश लुइटेल